Tonga diamondra ara-panahy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Manjary diamondra ara-panahy
Mahatsiaro tena terena ve ianao? Fanontaniana tsy misy toa izany ve izany? Voalaza fa ny diamondra dia tsy mamorona afa-tsy amin'ny tsindry mavesatra. Tsy fantatro ny momba anao, fa ny tenako manokana dia mahatsapa ho toy ny haratra manorotoro noho ny diamondra.
Misy karazany ny fanerena, fa ny karazana izay heverintsika matetika matetika dia ny fanerena ny fiainana andavanandro. Mety handratra na mety hamolavola antsika. Ny iray hafa, mety manimba ihany koa, ny karazana dia ny fanerena hampifanaraka sy hihetsika amin'ny fomba manokana. Azo antoka fa nametraka ny tenantsika tao anatin'ity fanerena ity isika. Indraindray isika amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao. Na dia miezaka manandrana tsy voataona aza isika, ny hafatra feno hafetsena dia afaka miditra ao an-tsaintsika ary mitaona antsika.
Ny tsindry sasany dia avy amin'ny manodidina antsika - ny vady, ny tompon'andraikitra, ny namana ary na ny zanakay aza. Ny sasany amin'izy io dia avy amin'ny fiaviantsika. Tadidiko ny fihainoako ny zava-mitranga amin'ny pensilihazo mavo raha vao freshman aho tao amin'ny ambasadin'ny ambasadaoro any Big Sandy. Tsy mitovy izahay, fa toa ny hanome endrika anay ny fanantenana. Ny sasany taminay dia nahatratra ny loko mavo isan-karazany, fa ny hafa kosa tsy niova loko mihitsy.
Ny iray amin'ireo fitakian'ny ara-dalàna ao ambadika anay dia ny hoe tsy maintsy manaraka ny fitsipika sy ny fitondran-tena mitovy ihany ny tsirairay, na dia manao toy izany aza. Izany dia tsy namela firy ho an'ny isam-batan'olona na fahalalahana maneho hevitra.
Toa tsy nanjavona mihitsy ny fanerena hampifanaraka, fa mbola mahatsapa izany isika indraindray. Ity tsindry ity dia mety hiteraka fahatsapan-tena, ary mety hamporisika hikomy mihitsy aza. Mbola mety hahatsapa ho voasarika isika hanaitra ny maha-tokana antsika. Fa raha manao izany isika dia hanimba ny lanjan'ny Fanahy Masina.
Tsy tian'Andriamanitra ny pensilihazo mavo ary tsy tiany hampitahaintsika ny tenantsika. Fa sarotra ny manangana sy mihazona ny maha-izy anao rehefa nofolavola na tsindry hiezaka hiezaka ny fenitry ny fahalavorarian'ny hafa.
Tian'Andriamanitra hihaino ny fitarihan'ny Fanahy Masina isika ary hampiseho ny maha-izy azy izay niasa tao anatintsika. Mba hanaovana izany dia mila mihaino ny feony malefaka sy malefaka Andriamanitra ary mamaly izay lazainy. Afaka mihaino sy mamaly azy ihany isika raha mifanaraka amin'ny Fanahy Masina ary mamela azy hitarika antsika. Tadidinao ve fa nangataka antsika i Jesosy mba tsy hatahotra antsika?
Ahoana kosa raha ny tsindry avy amin'ny kristiana hafa na ny fiaraha-monina misy anao dia toa mitaona anao amin'ny lalana tsy tianao haleha? Ratsy ve ny tsy manaraka? Tsia, satria raha mifanaraka amin'ny Fanahy Masina isika rehetra dia mandeha eo amin'ny fitarihan'Andriamanitra daholo. Ary tsy hitsara ny hafa isika na hanery ny hafa handeha any amin'izay tsy tarihin'Andriamanitra.
Andeha isika hifandray tsara amin'Andriamanitra ary hahitana ny fanantenany ho antsika. Rehefa mamaly ny fanerena malemy fanahy isika, dia lasa lasa diamondra ara-panahy no tiana hahatongavantsika.